Sina fantsom-pandroana poleta vita pirinty China mpanamboatra sy mpamatsy | Chengpai
Panel fandroana poleta efatra ...
Faucet an-dakozia LED ny tasy ...
Ceiling nitaingina LED retangu ...
Loha loha fandroana LED miaraka amin'ny ...
Isa maodely CP-LJ06
farany Voakilasy / borosina
Fametrahana Nitaingina rindrina
Fepetran'ny tontonana shower
Dimension shower shower 230x60mm
Ny halavan'ny fantson'ny fandroana 1500mm
Fonosana Kitapo PE, foam ary baoritra
Fotoana fanaterana 10 andro
Lafin-tsifotra rotsakorana ambony, jet jet, faucetl, fandroana tànana
Panel tontonana 304 vy vy
Mpangaro 304 vy vy
Fantsom-pandroana 304 vy vy
Loha fandroana mitazona haingo sy mpihazona Plastika
Lanja milanja (kg) 8
Lanja mavesatra (kg) 10
Fampahalalana momba ny accessories
Misy mixer ENY
Lohan'ny fandroana tànana ENY
Tompon'ny loha fandroana ENY
Ity tilikambo fandroana vy tsy misy fangarony ity dia misy lohan'ny fandroana lehibe izay miorina ambony. Ny lohan'ny fandroana dia manana endrika mahitsizoro tora-droa miaraka amina loha maoderina mahavariana, manome rano mikoriana tsara izay manarona ny vatanao iray manontolo hanomezana anao traikefa fandroana tena manintona.
Ny tapakila famafazana dia oram-be any ambony, fantsom-baravarana, fandroana mihantona ary fantsom-panafody.
Fiaramanidina fanampiny lehibe roa fanampiny ho an'ny fitifirana vatana. Miaraka amin'ny vaovaom-bokotra jet 48, manomeza spa traikefa tena tsara.
Fandroana ranonorana be habe be, famafazana malalaka. Miaraka amina sombin-tsakafo 50 mizara amin'ny lohan'ny loha fandroana, miaraka amin'ny tsindry ambony sy ranonorana milamina. Ny fantsom-pandrefesana silikôlika mora mijanona dia mampijanona ny refy amin'ny sokay izay manakana ny lavaka tsy ho voasakana sy mitete, tsy misy manentsina sy mitete. Eo koa ny fiasan'ny riandrano, manome safidy hafa ho an'ny fandroana.
Ity takelaka fandroana ity dia fananganana vy tsy metaly 30% mavesatra mavesatra, maharitra amin'ny fanoherana ny harafesina. Ny famaranana chrome vita amin'ny endriny dia mahatonga ny loha fandroana ho tsara tarehy sy mahafinaritra miaraka amin'ny haingon-trano fandroana.
Ny valindrihana valizy mando dia miaraka amin'ny diverter anatiny. Tanana fifehezana roa no vita amin'ny vy vy 304. Ao anaty valve douche dia miorina amin'ny cartridge vita amin'ny seramika avo lenta manome ny fahaizana hamadika na hivoaka mora foana ny outlet tsirairay rehefa ilaina izany.
Ny lohan'ny fandroana tànana mitazona hosotra 150cm dia mety kokoa. Mandro ho an'ny ankizy na olon-dehibe angamba misy olana. Tsy dia misy loatra amin'ny lohan-doha nitazona tanana. Ny savony dia afaka manasa mora foana.
Fametrahana haingana sy mora. Minitra vitsy monja ny fametrahana ity fandroana rindrina ity. Ny Surface nitaingina sy nipaipaika tanteraka, dia mifandray mora foana amin'ny fidirana rano mafana sy mangatsiaka anao.
Misy fantsom-paty apetraka amin'ity takelaka fandroana ity, mora kokoa ny manasa tongotrao.
Chengpai Company efa nanolorana azy ho fampivelarana fandroana vokatra mihoatra noho ny folo taona. Izao dia vita amin'ny tsipika vokatra marobe, vokatra tsara kalitao kokoa, vidiny mirary kokoa.
Teo aloha: Ny valindrihana dia mitaingina lohan'efatra fandroana efatra
Manaraka: Toeran'ny fandroana telo
Panels fanasana biriky
Hamafana ny lamba fandroana
Panel fanorana fanorana
Fanapahana lamba tontonana
Upc fandroana tontonana
Fofonosina lamba famaohana vy tsy mihetsika
efitrano fandroana vy tsy misy fandroana vy
Toeram-pisakafoanana LED LED telo miasa
Ranonorana rotsakorana sy lohandranon'orana
Head manify telo fonosana Ultra manify
Lehibe farafahakeliny loha fandroana hazavana LED amin'ny ...